बाजेसित चिकेको-fucked with my grand father - Indian Girls Nude XXX Images
बाजेसित चिकेको-fucked with my grand father
बाजे: मन थाम्नै नसकेर दुध त समाते, तर चिक्नै त अलि हुँदैन रोजि। म झसङ्ग भएँ। तर मन थाम्न सकिन। मैले भने: दुध समातेर लाडो ठन्काउन हुनि चिक्न नहुनि हुन्छ? अरुलाई सन्काएर छोड्ने? नचिक्ने भए किन दुध अठ्ठयाएको त? म बज्यैला भन्दिन्छु नत्र।
अनि बाजेले भने: केटी नपाएझैँ आफ्नै नातिनीलाई के चीक्नि भनेर हो के रे अब तँ नै त्यसो भन्छेस भने त ……. यस्तो राम्रो कलिलो पुती नचिकी छोड्ने मन त मलाई पनि कहाँ छ र!
अनि बाजेले एक पटक मेरो चाकमा प्याट्ट पिटे र लाडो पुतीबाट निकालेर मेरो मुखमा राखिदिए। मैले लाडो चुस्न लागेको मात्रै थिए ह्वाल ह्वाल फुसी आउन थाल्यो। मैले फुसी सबै खाएँ र लाडो चुस्न थालेँ। मेरो पुतीबाट पनि ह्वाल ह्वाल पानी बगेको थियो। बाजेले पानीसँग मेरो पुती पनि चाट्न थाले। म: यस्तो बुढेसकालमा पनि फुसी त ह्वाल ह्वाल निकाल्यौ त बाजे।
बाजे: रोजि म तँलाई यौटा कुरा नढाँटि भन्छु। तँ नाङ्गै सुतेको थाहा पाएर यो पटक तँ घर आएदेखी हरेक रात म तेरो कोठामा गएर तेरो दुध र पुती हेर्दै छोल्थेँ। बज्यै नभएकोभए उहिले चिक्थेँ तँलाई। बल्ल आज मौका मिल्यो। Share this:Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)	November 6, 2014 admin	Posted in Nepali SEX Stories	Post Permalink
← पत्र कारको बुढी चिक्दा	jethi keti haru lai chikne chahanaa →